The Life of A Forsaken Girl! | The World of Pinkgold
little moon on July 31, 2008 at 6:44 am said:
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဖတ်ကောင်းတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးပါ။
ဒါလေးဖတ်ပြီး ဂျုးရဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်နှင့်ချစ်ခင်ခြင်း (နံမည်အနည်းငယ်လွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါသည်) ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတယ်။ ပညာရေးမှာ အလုပ်အပေါ်မှာ လောဘကြီးလွန်းလှတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကောင်မလေးတစ်ယောက် အကြောင်း …. 🙂
Pinkgold on July 31, 2008 at 9:28 am said:
ကိုသင်ကာက ကျွန်မကို နင် ဒီလောက်အလုပ်များနေရင် ရည်းစားရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စ နောက် နေတတ်တော့.. အလုပ်များလွန်းတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ သူ့ချစ်သူအကြောင်းလေးကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ ရေးမိတာပါ.. အားပေးလို့ ၀မ်းသာရပါတယ်ရှင်
myooo.nyan on July 31, 2008 at 1:36 pm said:
စာအရေးသား ကောင်းပါတယ်.. ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေးနိုင်ကြောင်း စာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနှင့် အားပေးပါရစေ…
Stanley on August 1, 2008 at 5:20 am said:
ဒီလိုပြဿနာမျိုးက ခုခေတ်မှာ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်သဗျ။ အထူးသဖြင့် ထက်လွန်းတဲ့ စုံတွဲတွေကြားမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးကလည်း ငွေရှာကောင်းတော့ မင်းကို ငါ ရှာကျွေးနိုင်တယ်။ မင်း အလုပ်လုပ်စရာ မလိုဘူးပေါ့။ မိန်းကလေးဘက်က ကျတော့လည်း အရင်ခေတ်က မိန်းမတွေလို သေစာရှင်စာ ဖတ်တတ်ရင်တော်ပြီ။ လင်ကို ဘုရား သားကို သခင်တွေ ဘာညာတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။ ခုခေတ်က ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ ရင်ဘောင်တန်းတယ်ပေါ့။ သူ့မှာလည်း သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ပဲ ကွဲသွားကြတာတွေ မနည်းပါဘူး။ တကယ်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုလေးထားပြီး ညှိယူကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်မဟုတ်တောင် နှစ်ဘက်လုံးအဆင်ပြေမည့် ကြားအဖြေ (compromise) ရနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ပန်းခရေ on August 1, 2008 at 10:30 am said:
တော်တယ် နာ့အတိုင်းပဲ အဟီး
လင်း on August 1, 2008 at 2:44 pm said:
- on August 1, 2008 at 4:30 pm said:
အပြင်လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ နီးစပ်စွာတင်ပြသွားတဲ့ အတွက် ဖြစ်ရပ်မှန်လိုလို တောင်ထင်မိသွား ပါတယ်။ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
Ashin Kumara on August 7, 2008 at 9:43 pm said:
ကိုယ်တွေ့ အ ဖြစ်အပျက်များလားလို့တောင်ထင်မိတယ်။ အခြားသူတွေထားခဲ့တဲ့ကွန်မင်း ဖတ်မှဝတ္ထုတိုလို့သိလိုက်ရတာ။တကယ်ကော င်းတယ်။သိပ်ထက်မြက်လွန်းတဲ့မိန်းကလေးရဲ့စရိုက် ပေါ်လွင်တယ်။
..တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေကသိပ်ထက် လွန်းရင်လည်းမကြိုက်ကြပြန်ဘူး။ ကြော်ငြာဝင်မယ်…အဲဒီအထဲမှာငါမပါဘူး ..။